Ibiza - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem
Ibiza bụ otu n'ime agwaetiti ise na mpaghara Balearic nke na-anabata ọtụtụ ndị njem nleta kwa afọ. Ma ọ bụghị maka obere: osimiri ya ndị nwere kristal, ndụ abalị ya, na ọtụtụ ọrụ ọ na-enye ndị ọbịa ya na-adọrọ nnọọ mmasị. Na mgbakwunye, ihu igwe dị nro n'afọ niile, nke pụtara na, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa iji chebe onwe gị ntakịrị oge oyi, ịchọrọ n'ezie ịga ije n'okporo ámá ya.
Onye ọ bụla chọrọ ịga ọmarịcha ebe a ga-ahụ paradaịs, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nọ n ’nrọ. Enwere akụkụ dị ebube n'akụkụ ụwa niile, mana Ibiza bụ otu n'ime agwaetiti ndị nwere isi ọma, ya na mmiri ndị na-asọ mpi na ịma mma dị iche iche na nke Oke Osimiri Caribbean.
Na nke a anyị ga-agbakwunye la ụtọ arụrụ n'ụlọ nri nke a kwadebere n'ọtụtụ ụlọ mmanya na ụlọ nri ịbụ ndị ndị ọrụ TripAdvisor ji kpọrọ ihe. Egbula oge ịnwale ofe galiki Ibizan ma ọ bụ ihe oriri ọdịnala ọdịnala, nke ikpeazụ kwadebere karịsịa na mmemme pụrụ iche, dị ka ekeresimesi.
Yabụ, kedu ihe ị na-eche iji gaa Ibiza? N'ebe a, ị ga-enwe ike ịchọta ozi niile nke mere na ị nwere njem a na-agaghị echefu echefu. Echefula ya.
ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha ọnụ n'ụwa
por Mariela Carril eme 4 izu .
Ebe mara mma na-amasị m mana ọ dị m anya inwe nnukwu ego, yabụ m ga-edozi maka ịhụ ha…
por Mariela Carril eme Ọnwa 8 .
Ibiza dị na Mediterenian na ọ bụ akụkụ nke agwaetiti Balearic, o nwere kilomita 210 nke oke osimiri na ụfọdụ ...
por Susana Garcia eme 2 afọ .
por Maria eme 2 afọ .
por Mariela Carril eme 2 afọ .
por Susana Garcia eme 3 afọ .
Obodo San Antonio, nke a makwaara dika San Antonio Abad ma obu Sant Antony de Portmany. Obodo a nke Ibiza ...
por Maria eme 4 afọ .
Fgafe Ibiza maka naanị 8 euro bụ nnukwu atụmatụ. N'ihi na ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ anyị nwere ike ...
por Carmen Guillen eme 5 afọ .
Anyị niile maara na ogologo oge anyị na-eche ime ndoputa maka ezumike ezumike, ka anyị na-achọta ihe dị oke ọnụ, ...
por Susana Garcia eme 6 afọ .
Ibiza bụ agwaetiti a ma ama maka oriri ezumike ya, nnukwu ụlọ ịgba egwu abalị na ndụ ụmụaka na-eto eto, mana agwaetiti a ...
por Osimiri na Resorts eme 9 afọ .
Ibiza bụ otu n'ime ebe kachasị egwu ndapụta n'ụwa, ebe ụbọchị gafere n'otu n'ime ọtụtụ ...